Sanadguurada 10aad ee 9/11 - BBC News Somali
Sanadguurada 10aad ee 9/11
11 Sebtembar 2011
Image caption Madaxweyne Bush oo dhegta loogu sheegayo xilligii weerarku dhacay
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa hogaamiyay xus loo sameynayay ku dhawaad saddex kun qof oo ku dhintay weeraradii 11 September, ee lagu qaaday waddanka Mareykanka toban sano ka hor.
Maalintaasi waxa keentay in Madaxweyne George Bush uu galo waxa uu ugu yeeray dagaalka argagaxisada ka dhanka ah.
Goobto qaraxyadu ka dhaceen Magaalada New York oo ahayd daarihii xaruntii ganacsiga adduunka waxaa socod ku maray ciidamada booliiska iyo dadkii dab damiska ahaa. Iyadoo daqiiqado loo aamusay xuska dadkii ku dhintay maalintaasi.
Wareysi uu siiyay telefishinka National Geographic, Madaxweynihii hore ee Mareykanka George W Bush waxa uu sheegay in dhacdooyinkii maalintaasi 11 september inay degdeg wax uga bedeshay madaxtinimadiisii.
Dhinaca kale qof bam isku soo xiray oo Taliban ah ayaa weeraray saldhig ciidamada NATO ay ku leeyihiin Afghanistan gobolka dhinaca bartamaha ku yaal ee Wardak, halkaasi oo laba qof ay ku dhimatay, in ka badan boqol qofna ay ku dhaawacmeen kuwaasi oo u badan ciidamada Mareykanka.
Weerarka ayaa yimid saacado ka hor iyadoo Mareykanku xusayo sanadguurada 10aad ee weeraradii Mareykanka.
Isagoo ka hadlayay xaflad ka dhacay magaalada Jabul ayaa danjiraha Mareykanka, Ryan Crocker, waxa uu sheegay in ciidamada Mareykanku ay u joogaan Afghanistan inay ka hortagaan weerarao mustaqbalka ka dhaca Mareykanka.